olola – Welcome to bilisummaa
Tag Archives: olola
Oosiiyaas Yoonaa Jidduu kana olola addaa tokkotu oofama; innis Professeroonnii fi Doktoroonni keenyi bu’aa wayiitu akka hin buufne taasisanii namoonni hafarsan ni mul’atu. Dhugaan jiru …
“OPDOnlleen OMN keessa hojjatuuf mirga qabdi” jedhu bulchitoonni OMN
Haala yeroo ammaa OMN irratti deemuu laalchise bulchitoonni OMN gara Paaltookin ummataaf ibsa kennan. Deggarttoonni OMN eega hamii fii jettejetteen waayee namoota achi keessa hojjachaa …
Mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessa maaltu adeemaa jiraa?
Abdii Boruutiin Yeroo ammaa, yoomiyyuu caalaa, diinni kan xiyyeeffachaa jiru dhaabota (dhaabilee) ykn jaarmayoota Oromoo, kan isaan morman, qofaatti otuu hin taane, dimshaashumaan Oromootti, keessumaayuu …